TV | Somaliland Voice - Part 12
Daawo: Gudoomiyaha ku meel gaadhka ah ee Xisbiga Waddani Mudane Cabdilqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde la hadlaayay taageerayaal cusub oo ku soo biiray xisbigaas Waddani oo ka soo jeeda Beelaha Dega Gobolada, Saaxil,Daadmadheedh Iyo Waqooyiga Burco.
11th October 2017 By Somaliland Voice
Hadaladii Gudoomiye Jirde waxa ka mid ahaa:
Kulmiye waxa ay ogyihiin in aanay soo noqonayn, waxa ay ogyihiin inaanay cid dambe dooranayn, sidaa daraadeed, boobka dhalka intii ay ka sii gaadhsiin karaanba way ka sii gaadh siinayaan.
Ururka La Magac Baxay Midnnimo Oo Si Adag U Cambaareeyey Shirkii Burco Ku Dhex Maray Beelaha Bariga Burco Iyo Waqooyiga Hargeysa
Ururka Midnnimo ayaa si adag u deedafeeyay shirkii iyo go’aankii ay ku heshiiyeen qaar ka mid ah madax dhaqameed iyo siyaasiyiin beelaha bariga Burco iyo waqooyiga Hargeysa. Shirkaas oo loogu ololaynaayay Xisbiga Kulmiye iyo musharixiisa Muuse Biixi.
Ururka Midnimo waxa uu ka soo saaray warsaxaafadeed uu ku naqdiyaayo shirkaas iyo go’aamadii ka soo baxayba, waxa ay tilmaameen in shirkaasi uu yahay mid lagu wiiqaayo Qarannimada Jumhuuriyadda Somaliland oo ay tahayna in la jabiyey dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland.
Warsaxaafadeed kaas Ururka Midnnimo oo uu nuqul ka mid ahi soo gaadhay Somalilandvoice ayaa u dhignaa sidatan:
“Guddida fulinta, golaha musdambeedka iyo dhamaan xubnaha ururka Midnimo waxay si mug iyo miisaan leh u cambaaraynayaan go’aamadii ka soo baxay shir beeleedkii ka dhacay magaalada Burco 08/10/2017, waxaanan u aragnaa shirkaas xad gudub meel ka dhac lagu sameeyey dastuurka Jamhuuriyada somaliland qodobadiisa 8aad iyo 9aad oo u dhigan sidan.
Qodobka 8aad ee dastuurka: Sinaanta
Muwaadiniinta somaliland: kala saraynta, takoorka iyo xulafaysiga ku salaysan qabiilka, isirka, abtirsiga, dhalashada iyo deegaanku waa reeban yihiin.
1) Nidaamka siyaasadeed ee jamhuuriyada somaliland waxa
Hadaba haddii aanu nahay Ururka Midnimo waxaanu ku boorinaynaa Maxkamadda Distooriga ah , Madaxweynaha Jumhuuriyadda Somaliland, iyo Hay’adaha Sharci dejinta ee ay khusayso inay si deg-deg ah u qaadaan tallaabooyinka soo socda:
B). In Xilalka laga xayuubiyo Wasiiradii & Xubnahii Dawladda ee ka qayb galay shirkaas isla markaana la horgeeyo Maxkamad Sharci ah.
Dhegayso: Gudoomiyaha Xisbiga UCID Mudane Faysal Cali Waraabe oo si adag uga hadlay Shirka Burco ee qaybo ka mid ah laba beelood ku qabteen, kuna eedeeyay Xukuummadda iyo Xisbiga Kulmiye.
Mudane Faysal oo u waramaayay Idaacadda BBC-da qaybta Af-Soomaaliga ayaa ku eedeeyay Xisbiga Kulmiye iyo Xukuummaddiisa in ay dalkii dib ugu celiyeen kala qaybin iyo shir beeleedyo anyu soo dhaafnay oo aynu xisbiyo ka samaysanay.
“NINKII U HANWEYN HOGAANKA DALKOW HANKAAGU HA DHAAFO REER HEBEL”
Murashaxa Jagada Madaxweynaha ee Xisbiga Waddani Dr Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) oo Balan qaad aad u wesyn u Sameeyey Beelaha Gabooye
Dr Cabdiraxmaan Cirro waxa uu khudbad qiimo badan oo balan qaad, dhiirigelin iyo guubaabin leh u soo jeediyay beesha Gabooye.